Ity dia fanomezam-boninahitra, ho an'ny Post bilaogy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ... | Martech Zone
Ity dia fanomezam-boninahitra, ho an'ny bilaogy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao…
Alahady, Jolay 15, 2007 Alakamisy, Jona 11, 2015 Douglas Karr
Izany no tsy ny bilaogy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao… nooo… fanomezam-boninahitra fotsiny ity.
Rehefa nivazivazy aho, dia nesoriko ny drafitra lahatsoratra 3 androany maraina. Drafitra efa natomboko efa ela izy ireo saingy toa tsy afaka nandanjalanja tsara azy ireo hamoahana aho. Angamba ny iray tamin'izy ireo no lehibe indrindra lahatsoratra eto amin'izao tontolo izao. Tsy ho fantatsika izany. Ny iray dia ny fampitahana ny bilaogy amin'ny fivoaran'ny gazety. Ny faharoa dia ny fifandanjana ny fitarihana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fanatanterahana azy. Ny fahatelo dia lahatsoratra mitsikera ny fampitahàn'ny indostrian'ny Direct Mail ny mailaka sifotra amin'ny mailaka.
Ho anao mpitoraka bilaogy any, impiry ianao no manoratra na mamafa ny famoahana lahatsoratra alohan'ny hamoahana azy? Mety manipy 1 na 2 isan-kerinandro aho.
Tags: fitorahana bilaogybilaogy orinasahira lehibe indrindra eran-tanyjack maintymaharitra dfanomezam-boninahitra
Mampiasà faharanitan-tsaina vitsivitsy ary aza i Captcha
Jul 15, 2007 amin'ny 11: 59 AM
Tokony hiaiky aho fa tsy manana karazana 'fampandehanana tsara' ny fahaizako manoratra fa ratsy ka raha misy fiezahana hanatsara ny fomba hampihenana ny teny = 0. Mampiasa ny fahaizana literatiora vadiko tsara aho indraindray mba hampihenana ny fitsipi-pitenenana. lesoka nidina hatramin'ny 'mahatsiravina' ka hatramin'ny 'ambaratonga ambany' saingy indrisy tsy eo foana izy rehefa mila 'mandeha mivantana' aho.
Mihevitra ny fahaizako miteny anglisy ve ny fiantraikan'ny famakiako? Tsy azoko izany, azo antoka fa tsy ho tonga hamaky ny lahatsoratro ny olona noho ny kalitaon'ny fanoratana, ka amin'ny firy no mamono ny olona ny fitsipi-pitenenana / tsipelina ratsy? Tsy mbola nidina lalina tany amin'ireny lalina ireny aho.
Manana lahatsoratra mbola tsy vita aho izay mety hijanona tsy navoaka fotsiny satria heveriko fa hevitra ratsy amin'ny ankapobeny izy ireo fa tsy noho ny tena votoatiny.
15 Jul 2007 amin'ny 12:50 PM
Grammar no ombelahin-tongoko Achilles, Nick. Matetika aho mijery topi-maso ny lahatsoratra ary manisy fanovana azy in-5 na in-6 alohan'ny hamoahana azy. Aorian'ny famoahana ny lahatsoratro dia matetika aho no mila manisy hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana fanampiny.
Tsy manam-bady hijerena ny asako aho… fa angamba afaka mividy mpanonta aho indray andro any. Tena hahafinaritra izany!
Jul 15, 2007 amin'ny 11: 24 AM
Tokony holazaiko fa tsy mampatahotra anao ny mijery ny soroko… ahoana no ahalalanao fa nofafako ny drafitra 3+ izay tsy 'azo volena' fotsiny? Huh?
15 Jul 2007 amin'ny 12:48 PM
Angamba fanadiovan-tena tamin'ny faran'ny herinandro teo teo amin'ny faritra nisy anay ry Papa a! 🙂
15 Jul 2007 amin'ny 6:41 PM
Farafaharatsiny iray isan'andro, isaky ny bilaogy no anoratako. Tsotra toa ny lohateny indraindray. Ny fitsipiky ny ankiben-tànako dia ny hoe raha tsy afaka manao ilay lohateny mahasarika aho, farafaharatsiny mankany amin'ny drafitra satan'ny.
16 Jul 2007 amin'ny 8:59 PM
Vao hitako ny BLOG-nao ary hitako fa mpanoratra mamokatra ianao. Ny fanambiko lehibe indrindra dia ny mandeha amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fandehan-javatra sy fanoloran-tena mety ho amin'izany.
Nanomboka ny BLOG aho tamin'ny aprily 07, tamin'ity taona ity. Ary manana fotoana izay tena nahazo aingam-panahy sy ny hafa aho izay blahhh! Nanana tranga vitsivitsy aho izay niova hevitra fohy ho tsinontsinona.
Nahazo aingam-panahy ho ahy aho… ary misaotra anao! Manomboka amin'ny mpankafy D Tenosity iray ka hatramin'ny iray hafa… 🙂
17 Jul 2007 amin'ny 2:42 PM
Vao nanao ny androko ianao ry Christina! Misaotra! Ary Rock On! 😉
16 Jul 2007 amin'ny 8:01 PM
Hatramin'ny nanombohako, izay tsy dia ela akory izay, toa hitako fa miasa 2: 1 ho ahy ny ie, avy amin'ny hevitra 2 voalohany avoakako ny iray ary ny iray kosa miverina amin'ireo drafitra. Vao tsy ela akory aho no nanomboka nitahiry drafitra ho an'ny famoahana taty aoriana, ary nahita ny fizotrany ho toy ny famerenana miverina.
Ahoana no hampifandanjanao ny fihazonana ireo volavolan-dalàna hiasa ary tsy avelany ho antitra, ary ny fanekena ny zava-misy fa ny herinandro dia fotoana lava be eo amin'ny tontolon'ny bilaogy? Mazava ho azy fa mifandraika amin'ny lohahevitra, saingy nanontany tena ianao raha mila manary fako tsara be dia be ianao satria efa antitra.
Ary eny, mijery aho ary manova azy manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 koa, alohan'ny hamoahana azy any.
17 Jul 2007 amin'ny 2:41 PM
Tsara ny fahalalana fa tsy irery aho, Ville!